Iqonga lesigqibo seXesha leXesha laseBluecore le-eTail | Martech Zone
Ungumthengisi. Uza kwenza ntoni ngokulandelayo? Lo ngumbuzo abathengisi bazibuza wona rhoqo. Idatha ngoku ihamba kwimibutho ngesantya sokurekhoda kunye nevolumu, kwaye inkqubo yokuququzelela nokwenza le datha inokuphazamisa.
Kubaqalayo, unikwe uxanduva lokwazi izinto ezahlukeneyo malunga nabathengi bakho:
Ngoobani abathengi bam abaxabisekileyo?
Ngoobani abathengi bam abathenga kuphela izinto ezinesaphulelo?
Ngabaphi abathengi endizakuphulukana nabo?
… Kwaye uluhlu luyaqhubeka.
Ukuba ungadibanisa idatha yamajelo amaninzi kwaye wenze ingqiqo yokuba ngoobani kubathengi bakho, wenza ntoni ngokulandelayo ngolwazi? Intsingiselo, wenza njani ngayo? Esi sisicwangciso sakho seendaba: Ngubani ojolise kuye, ngawaphi amajelo onxibelelana ngayo nale miyalezo kwaye wenza nini? Obu bunzulu bolwazi, ukuqonda, kunye nokukwazi ukufikelela kubathengisi abaninzi.
Ukuphendula kolu celomngeni kumzi-mveliso, uBluecore, umboneleli wetekhnoloji ye-SaaS eneminyaka emine, ubhengeze iQonga labo elitsha lesigqibo kubathengisi ukunceda ukuphendula umbuzo othi "yintoni elandelayo?" Isinxibelelanisi sayo sinye sixhobisa abathengisi ukuba balawule idatha kwaye bavelise abaphulaphuli kumajelo onke, ngaphandle kokubandakanyeka kwe-IT.
Siphila kwihlabathi lokonwaba kwangoko apho abathengisi bengenalo ixesha lokuzonwabisa. Isantya kunye nokuqonda okwenyani lelona xesha kuzitshixo ekuqhubeni ukufunyanwa, ukuguqulwa kunye nokugcinwa kweemetri kwimeko yanamhlanje yokuthengisa. CRM kunye kubahlalutyi izixhobo zinika abathengisi amandla okufumana ulwazi ngale njongo, kodwa ukuqokelela idatha ayiqhubeki neziphumo.
Abathengisi abathengisayo abadingi datha okanye zixhobo zintsha zokudibanisa idatha. Bafuna uncedo lokucacisa imikhwa kwidatha yabo kwaye bafuna izixhobo zokuthatha izigqibo zokusebenzisa loo datha. Xhobisa amaqela akho ukuba asebenze kwinto abayaziyo malunga nabathengi bakho ukuze ukwazi ukwenza amava anentsingiselo ngokwenyani ngexesha elifanelekileyo kuhambo lokuthenga.
Abathengisi abadingi datha. Bafuna uncedo lokuyisebenzisa- lelo licandelo elilahlekileyo kwisitaki sanamhlanje sokuthengisa. Siyile iqonga lethu lokudibanisa ngaphandle komthungo ngaphakathi kwizitokhwe ezikhoyo zentengiso, ngaphandle koncedo lwamaqela e-IT, kunye nogcino lomsebenzisi olulula ukuze abathengisi bakwazi ukwakha kunye nokuvumelanisa abaphulaphuli kwizitishi kwimizuzwana nje. UFayez Mohamood, umseki kunye, kunye ne-CEO yeBluecore
Njengezicubu ezinxibelelanayo kwisitaki sakho sentengiso, iBluecore's Decisioning Platform ngaphandle kokudibanisa imithombo yedatha, njengeCRM, ikhathalogu yemveliso kunye neqonga le-eCommerce, kunye netekhnoloji yejelo elinxibelelana ngqo nabathengi bakho. Ngokwenza njalo, iqonga lisebenza ngokuseta idatha enkulu ngemizuzwana, iyenza ukuba isebenze ngokukhawuleza kubathengisi ukwakha abaphulaphuli, abanokubandakanya abathengi bakho abaxabisekileyo, abathengi bezaphulelo, abathengi abaza kukrokrela. Abathengisi banokuhambisa amaphulo kuwo onke amajelo afana ne-imeyile, ezentlalo, ukukhangela kunye nendawo.
Fumana iDemo yesigqibo seQonga leBluecore
Masithathe umzekelo othile kwizihlangu zeembaleki zehlabathi kunye nomthengisi weempahla:
Njengomnye wabayili abaphambili behlabathi, abathengisi kunye nabasasazi bempilo kunye nezihlangu zendlela yokuphila, isinxibo kunye nezixhobo, olu phawu lwehlabathi kudala lwaziwa ngokukhokelela kwimikhwa yedijithali kwaye inikezela kubaphulaphuli bayo amava abandakanyekayo ngokwenyani- zombini ezivenkileni nakwi-Intanethi. Kodwa njengokuba kunjalo kubathengisi abaninzi abakwi-Intanethi, ngakumbi abo baphuma kwimibutho emikhulu enezakhiwo ezintsonkothileyo, ukufikelela kunye nokwenza ngokukhawuleza kwidatha yabathengi kungqineke kungumngeni kwinkampani.
Ukoyisa lo mceli mngeni, umthengisi ujike waya kwiBluecore ku:
Hlahlela kwaye umisele amanqanaba okusondela kubathengi usebenzisa idatha yexesha labathengi
Thumela ii-imeyile ezenzelwe wena ngokukodwa, umxholo wemidiya yoluntu, ubonise iintengiso kunye namava okwindawo
Ukufumanisa ukuqonda okwenzekayo kumthengi kunye nokuvelisa abaphulaphuli abathile abathengisayo kwimizuzwana ngokusekwe kwidatha yezembali kunye neealgorithms zokuxelwa kwangaphambili
Ukuvumelanisa ngokukhawuleza abaphulaphuli kuyo yonke i-imeyile, ezentlalontle kunye neendawo zonxibelelwano ukuze baqhube amaphulo okwenyusa amajelo amaninzi ngaphandle kokunika isebe le-IT uxanduva
Ngaphambi kweBluecore, besingenakho ukufikelela okwaneleyo kwidatha yabathengi. Khange sikwazi ukuyilawula ngokulula okanye sidwebe iintshukumo kuyo. Siye saqonda ukuba iBluecore ayinakusinceda ukusombulula le ngxaki, kodwa ingasombululwa ngaphandle kokuthwalisa umthwalo isebe lethu le-IT lehlabathi. Le yayiyindawo enkulu yokuthengisa kuthi, njengoko i-Bluecore's bhetyebhetye kunye nokusebenziseka ngokulula kusivumela ukuba sigcine amaphulo ethu okuthengisa apho kufanele ukuba abe khona-ngaphakathi kwisebe lezentengiso, hayi ezandleni zesebe lethu le-IT. Ukukwazi ukubuyisa ulawulo lwamaphulo ethu okuthengisa kwakukukhulu. Khange silibone iqonga ekulula ukulisebenzisa okanye elikhawulezayo ukuliphumeza kuso nasiphi na esinye isixhobo ukuza kuthi ga ngoku. UMphathi oPhetheyo weCRM
Umthengisi ngoku usebenzisa i- Iqonga lesigqibo seBluecore ukuhlalutya ngokukhawuleza nokudibanisa idatha, ukuvelisa abaphulaphuli ngemizuzwana kunye nokuphumeza amaphulo enqamleza ijikeleze imveliso entsha. Ngokukodwa, uphawu luxhamle kwiimeko ezintathu zokusebenzisa:
Ukunyusa uLawulo lokuThengisa ngaphezulu nokuFikelela kwiDatha
Phambi kokuphumeza iBluecore, ukwenziwa kwephulo le-imeyile kufuna uncedo kwisebe le-IT lenkampani kwaye kungathatha naphi na ukusuka kwiintsuku ezingama-40 ukuya kwezingama-60 ukuzazisa. Nge-Bluecore, nangona kunjalo, iqela lentengiso linokuvavanya kwaye liphumeze ukujolisa ekujolise kuko kunye nobomi bexesha lobomi obubangelwe yimikhankaso ye-imeyile ngeentsuku.
Ukongeza ekuncedeni ukunqanda ixesha elininzi kunye nokudityaniswa kobunzima be-IT, iBluecore ikwenze kwalula kumthengisi ukudibanisa la maphulo namanye amaqabane ezobuchwephesha. Umzekelo, iqela lentengiso linokuthatha iphulo elijolise kubathengi bexabiso eliphezulu kwizixeko eziphambili (okt iBoston, iNew York City, eLos Angeles) kwaye badibanise idatha kunye ne-Handstand Fitness App ukubonelela abathengi kwezo ndawo zeseshoni yoqeqesho simahla. .
Iziphumo eziphambili zale mizamo zibandakanya:
Isakhono sokuchonga abathengi abaninzi kwisiza kunye nokwazisa amaphulo okuthengisa kwakhona kunye neBluecore xa kuthelekiswa neqonga langaphambili lomthengisi, iSaleCycle
Amanqanaba aphezulu avulekileyo kwaye ucofe iBluecore kuneSaleCycle, ekugqibeleni ekhokelela kwimbuyekezo kutyalo-mali lwe-10: 1
Ukuphucula i-Omnichannel yeNtengiso yeNtengiso
Xa umthengisi eqonda isidingo sokuququzelela unxibelelwano olungaguquguqukiyo kuwo onke amajelo, yajika yaya kuBluecore ukuze ifumane uncedo. I-brand yakha i-omnichannel yayo yokunyusa iinzame ngokusungulwa kwesihlangu esitsha kumgca odumileyo wezihlangu. Ukuqala, inkampani isebenzise iPlatform yesigqibo seBluecore ukwakha abaphulaphuli bexesha lokwenyani labathengi abanobudlelwane obuphezulu bokuthenga iimveliso kumtya wezihlangu. Emva koko yahambisa amava obuqu, isayithi yamava abaphulaphuli ngokusebenzisa iBluecore ukuze isebenze ngaphandle komthungo kunye neqonga lomntu kunye nokuhlengahlengisa iphepha lasekhaya kubhabho ukubonisa isihlangu esitsha kunye nezinye iimveliso ezivela kumgca omnye. Inkampani ikwathathe le migudu ijikeleza ijelo ngokuhambisa iiasethi ezifanayo zokuyila ngaphakathi kwiintengiso ze-Facebook nangamaphulo okuthengisa nge-imeyile kwabo bathengi banobudlelwane obuphezulu bokuthenga njengoko kuchongwe yiBluecore.
Ukwandisa ubomi bemisebenzi yokwazisa ngephulo kunye nokugcina umxholo omtsha kubathengi bexabiso eliphezulu, iqela likwazise inkuthazo ekhethekileyo yokuphindaphinda iindwendwe kunye nabathengi abafumana umyalezo wokuchukumisa okwesibini onikezela ngokungena simahla kwesinye seziganeko ezinkulu zenkampani.
Ukuphakamisa ama-76% konqakrazo lomxholo owenzelwe wena
Ukonyusa uguquko ngaphezulu kwe-30% yokulahla inqwelomoya kwimikhankaso ebandakanya inkuthazo eyongezelelweyo yokungena komnyhadala
Ukuchonga abaphulaphuli abatsha kwiithagethi ezijikelezayo
IBluecore ikwancedise umthengisi ngeqonga lokukhulisa abaphulaphuli bakhe kumajelo amatsha ngokuqhuba iphulo lentlalontle elibophelelwe ekusungulweni kwemveliso entsha yehypes. Isebenzisa iqonga lesigqibo seBluecore sexesha lokwenyani, inkampani yakha abaphulaphuli babathengi abajonga imveliso entsha kwiintsuku ezingama-60 ezidlulileyo kodwa bangazithengi bajolise kubo ngeentengiso zikaFacebook.
Ngokubanzi, iBluecore's Decisioning Platform incede eli qela lentengiso ukuba lithathe ulawulo lwedatha yabathengi, yenze loo datha isebenze kwaye iyisebenzise ngendlela ekrelekrele, eyenzelwe wena yokuphucula ukusebenza kuwo onke amajelo. Ukusukela ukusebenza neBluecore, umthengisi ufundile ukuba ukufezekisa ezi ziphumo akukho malunga nokufumana iintaba zedatha yabathengi kwindawo enye. Endaweni yokuba umalunga nokuzisa inkqubo yokuthatha isigqibo malunga nento oyenzayo nazo zonke ezo zinto zibalulekileyo kwiqonga elinye.
Ngokuqonda kwabaphulaphuli, abathengisi be-eCommerce bafumana ukufikelela kumzi-mveliso okhawulezayo kunye nobunzulu kwideshibhodi yeendlela zokuziphatha- kunye nemveliso esekwe kulo naliphi na icandelo labaphulaphuli abakhetha ukulakha. Nje ukuba umthengisi enze abaphulaphuli ngaphakathi kweBluecore, ngoku banokufikelela kwiiNkcukacha zaBaphulaphuli ukuze babone ukuba icandelo elithile liqikelelwa njani ukuba lizibandakanye kwaye liguqule, kwaye emva koko liphuhlise imikhankaso kunye nezicwangciso zokwandisa iziphumo.
Ngokuqonda kwabaphulaphuli, iinkokeli zentengiso zinokufunda ngendlela ezona ziqendu zibaluleke ngayo zabathengi ezisebenza ngokunxulumene namanye amaqela abathengi, kunye nendlela amaphulo abo ahamba ngayo kunye nabaphulaphuli. Abathengisi banokuhlalutya le veki yedatha ngaphezulu kweveki kwaye bacwangcise iindlela zokuthengisa ngokuchasene namacandelo athile esiseko sabathengi.
Ideshboard yokuqonda abaphulaphuli iphendula imibuzo enje:
Lithini ixabiso labaphulaphuli? Ukujongwa kwipesenti yengeniso iyonke, ixabiso le-odolo yomndilili (i-AOV), inani eliphakathi leemveliso ngokwe-odolo nganye, ixabiso eliphakathi lobomi kunye nexabiso lokuphila eliqikelelweyo kwangaphambili
Iyintoni impilo yabaphulaphuli? Ukwahlulwa kwabathengi abalahlekileyo, abasebenzayo nabasemngciphekweni
Ndingaqhagamshelana phi nabaphulaphuli? Iinkcukacha zokuba bangaphi abathengi kubaphulaphuli abathile abanokufikelelwa kwisitishi esinikiweyo, njenge-imeyile, intlalontle, umboniso okanye isiza
Ngaba aba baphulaphuli bazibandakanya njani neemveliso? Imiboniso “yeRockstars,” “Iinkomo eziMali” kunye neemveliso “eziGugu ezifihlakeleyo”
Ngaba aba baphulaphuli bazibandakanya njani nendawo yam? Ukuqonda ngokulula imeko yomsitho, ifanele yokuguqula indawo kunye nokuthelekiswa kweziganeko zesiza
Ngaba aba baphulaphuli bazibandakanya njani nee-imeyile zam? Umbono ocacileyo wokuhanjiswa, ukuvulwa, kunye nokucofa ii-imeyile, kunye nokungabhalisi ngokusekwe kumacandelo ababukeli
Ngoobani abathengi abanomdla kakhulu? Ukujonga ngokungaziwayo abathengi ngabanye abaphulwe "ngabasebenzisi abaphezulu," "izikhangeli eziphambili" kunye "namandla aphezulu"
Funda ngakumbi malunga nokuqonda kwabaphulaphuli
tags: Ukuqonda kwabaphulaphuliluhlazaukwenza isigqiboIxesha elilungile